Golaha Shacabka ayaa maanta si adag uga dooday Xaqa Siyaasiga Dowladda Federalka Soomaaliya – Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa maanta aqrintii 2-aad marsiiyay mashruuc sharci ku saabsan xuquuqda Liil-tirka (Dhayma-nololeedka) Siyaasiyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya. Sharcigan ayaa Siyaasiinta DFS u ogolaanaya in ay helaan gunno ka ilaalisa in ay noloshoodu xumaato marka ay xilka ka dagaan kadib ama ay hawlgab noqdaan.
Xoghayaha Guddiga Xeer Hoosaadka iyo Xasaanadda Xildhibaanada Golaha Shacabka, Xildhibaan Faarax Xasan, ayaa yiri “waxaan codsanaynaa in la ansixiyo Sharciga Liil-tirka Siyaasiyiinta Dowladda Federalka Soomaaliya, si loogu daro miisaaniyadda soo socota, waayoo waxaa maqan xaquuda siyaasiyiin badan oo dalka usoo shaqeeyay, sharicigaanna waa u muhiim siyaasiyiinta DFS. Waxyaabihii aad ku darteen waan ku biirinay, si uu u noqdo sharci laga wada qayb qaatay”.
Gudoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa xildhibaada siiyay fursad ay uga doodaan hindise sharciyeedkan. Laakiin, Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa su’aal geliyey micnaha erey-bixinta LIIL-TIR oo ah magaca uu xeerkani leeyahay. “Waxaan rabaa in naloo sheego waxa laga wado liil-tir. Aniga waan baaray, waana waayay. Marka, ma wax naloo alifaa? Haddii laga waayay luuqada Soomaaliga, Carabigaa laga raadin karaa ama lahjadaha Soomaaliga sida Maayga” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa, balse wax jawaab ah kama uusan helin su’aashiisa oo ay dad badan la qabaan.
Xildhibaan Abti Doon ayaa yiri “waxaan soo jeedinayaa in la simo xuquuda siyaasiyiinta, oo aan loo fiirin kala saraynta xiligii uu shaqaynayay iyo lacagtii uu qaadan jiray”. Xildhiban Mahad Salaad ayaa isaguna sharcigan ka yiri “meesha laga yiri waxa uu xuquuqda siyaasadeed qofku ku weyn karaa xukun maxkamadeed, waxaa ila fiican in layiraahdo xukun Maxkamadeed oo ka kama dambays ah, waayo waxaa kugu dhici kara xukun qalad ah”.
Xildhibaan Dahir Amiim Jeesow ayaa kulanka ka sheegay in ay muhiim tahay inuu xeerku kala caddeeyo inuu xaqoodu la mug yahay waqtiga ay xilka hayeen iyo in kale. “Wasiirada aan dhamaysan 4 sano xuquuq miyeey yeelan doonaan? Waxaan ognahay mudadii yareed ee ay xukumaddaan jirtay inta wasiir ee la badalay. Aniga, waxaan qabaa in lagu xiro shuruud ah inuu wasiirku dhamaysto 4-ta sano ee madaxweynuhu joogo” ayuu yiri Jeesow.
Xildhibaan Shariif Cabdalla, oo aragti ahaan ka ag dhaw Xildhibaan Jeesow, ayaa yiri “xildhibaan shaqeeyay 4-ta sano ee uu baarlamaankan jiray iyo xildhibaanka baarlamaanka ku jiray 12 sano in aysan isku mid noqon ayaan qabaa. Sidoo kale, waxaan qabaa in gunnada lagu xiro hadba inta uu yahay mushaarka xiligaas ee baarlamaanka”.
Xildhibaan Faarax Cabdulqaadir ayaa aaminsan in la kala saaro siyaasiyiinta, waxa uuna yiri “waxaan qabaa in xeerkan lagu koobo siyaasiyiinta la soo doortay oo kaliya, lagana reebo kuwa la magacaabay. Waxaan kaloo qabaa in xildhibaanada oo dhan aan la dhihin ee layiraado waxaa xuquuq leh kuwa mudada dheer ku jiray baarlamaanka, kuwa kalana loo sameeyo sagootin”.
Xildhiban Cadulaahi Riinge ayaa u arka in ay Golaha Shacabka ku tahay ceeb in ay ka hadlaan xeerkan. Waxa uu yiri “waa nagu ceeb in aan dhahno mushaar ha naloo qoro oo aan ansaxsano lacag aanan shaqaysan, oo ah canshuurta shacabka”. Intaa marka uu yiri waxaa hadalka ka soo dhax galay Gudoomiye Cawad oo yiri “war maaha sharci baarlamanka horyaala hala tuuro, ee qodob uun ka hadal. In aadan rabin sharcigaan ha u caayin”.
Xildhibaanada Golaha Shacabka qaarkood ayaa istaagay doodda oo socota, iyagoo cod dheer ku oranayey “yaan lagu mashquulin xuquuq aa naga maqan” sida Xildhibaa Sakariye iyo Xildhibaan Riinge. Balse, Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka oo kulanka maanta guddoominayey, Mahad Cabdalla Cawad, ayaa yiri “anaga waan u baahanay xuquuqdeena, kulankana wuu noo xiran yahay”.
Maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta u gudbiyey Golaha Shacabka cabasho dhaqaale iyo xarumo ka maqan